-mandeha ao ambadiky ny traktera | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy -mandeha ao ambadiky ny traktera
Ahoana no fomba ahafahana manamboatra ny tranokely ho an'ny motoblock
Ny motoblock dia tsy maintsy ilaina amin'ny toeram-pambolena sy manana fitaovana samihafa: ny masinina dia afaka manondraka ny ovy, manala ny lanezy na ny orana alaina amin'ny ririnina. Amin'izany fotoana izany, ny lisitry ny singa izay mifandray amin'ny modely lafo indrindra amin'ny paositry ny motera dia voafetra ho 2-3 karazana singa mifandimby. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianatra ny fomba hanamboarana ny lambany amin'ny tanany manokana sy ny fomba fampiasana azy.
Ny fampiasana ny motera Salute 100, ireo toetra ara-teknika amin'ny fitaovana
Motoblock - vondrona iray tena ilaina ho an'ny toeram-piompiana madinika sy ho an'ny dacha. Ny habetsaky ny fampiharana io teknolojia io dia tena goavana, indrindra satria ny famokarana ireo singa dia tsy mitsahatra, mamoaka modely vaovao sy mivoatra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny motute 100 Salute 100 isika. Salyut 100: famaritana ny fitaovana Ny orinasa Rosiana an'ny OAO GMZ Agat ao amin'ny faritr'i Yaroslavl, izay nametrahana ny milina moto Salyut dia nanomboka ny famokarana ireo vondrona ireo tamin'ny taona 2002.
Ny mpitrandraka karakarao ho an'ny motoblock dia manao izany: fepetra tsikelikely
Angamba ny tompon'ny orinasa lehibe iray na ny zaridaina dia maniry ny hanamora ny fahombiazan'ny asa eto an-tany ary hampihenana ny fotoam-pambolena farafahakeliny, noho izany ny zaridaina ary miezaka ny manamboatra trakta sy fitaovana samihafa. Raha tomponao mahafinaritra amin'ity fomba fiasa mahasoa ity ianao ary te hividy karazan-tsakafo maro eo amin'ny teti-bola misy anao, dia ilaina ny mieritreritra ny ilana ny fitotoan-tsakafo iray ho an'ny fijinjana mekanika.
Ny tetikasa lehibe dia ahafahanao manangom-bola mahavariana, saingy misy ihany koa ny tsy fahampian-tsainy. Mifandray amin'ny dingam-pitodiana izy ireo - sarotra loatra ny manao izany amin'ny tanana, nefa tsy maninona koa ny mitondra fiara. Ary eto dia tonga amin'ny fanampiana sarotra, fa teknolojia mahomby. Andeha hojerentsika ny maha-solontenan'ity sehatra ity - ny gazetin'ny "Bison" malaza.
Ny endriky ny fitaovana, fampiasana sy fanamboarana ny tobinà motera Kaskad
Ny "famolavolana kely" eo anoloan'ny tarehimarika dia tena ilaina amin'ny tompon'ny zaridaina lehibe. Maro ny marika sy môtô maro ao amin'ny tsena izay samy hafa amin'ny endriny - na ny singa mitovy mitovy aza dia mety mitaky fizarana ho an'ny fanamboarana. Noho izany, maro ireo olona mividy vokatra avy any an-toerana, ny tsara, ny antsipiriany amin'izy ireo.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ -mandeha ao ambadiky ny traktera